Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း)
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Hydroxyzine ကို ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ယားယံခြင်းများကို ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် antihistamine ဟုခေါ်သော histamine ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်ကာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက ခန္တာကိုယ်ထဲတွင် ထွက်ပေါ်လာသော histamine ဟုခေါ်သည့် ဓါတ်တမျိုးကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပြပါသည်။ Hydroxyzine ကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကို ရေတိုကုသရန်အတွက် သုံးသလို ခွဲစိတ်မှု မတိုင်မီ/ခွဲစိတ်မှုပြီးနောက် စိတ်ဖြေလျှော့ပြီး ကောင်းစွာ အိပ်ပျော်စေရန် သုံးနိုင်ပါသည်။
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Hydroxyzine ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် တနေ့လျှင် သုံးလေးကြိမ်ခန့်) သောက်ရသည်။ ဆေးရည်အသုံးပြုပါက ဆေးပမာဏကို မတိုင်းတာမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။။ ဆေးနှင့်အတူပါလာသည့် ဇွန်းသို့မဟုတ် ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာပါ (အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးရပါ)။ တိုင်းတာရန် ပစ္စည်းမရှိပါက ဆေးဆိုင်တွင် တောင်းယူပါ။ ဆေးပမာဏ အနည်းအများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ၊အသက်အရွယ် နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပမာဏပိုသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်းများ မပြုရပါ။ ရောဂါအခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hydroxyzine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ hydroxyzine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ hydroxyzine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Hydroxyzine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Hydroxyzine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Hydroxyzine ကို မသောက်သုံးမီ
သင့်တွင် Hydroxyzine သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် Hydroxyzine ဆေးပြား၊ဆေးတောင့်၊ဆေးရည်တို့တွင်ပါဝင်သော အရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။၎င်းပါဝင်ပစ္စည်းများကို သိရှိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။
Antihistamine ဆေးများ၊ အအေးမိနှာစေးခြင်း၊ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် hay fever အတွက် ဆေးများ၊ စိတ်ကျဝေဒနာအတွက် ဆေးများ သို့မဟုတ် အတက်ကျဆေးများ၊ကြွက်သားပျော့ဆေးများ၊ narcotic အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊အိပ်ဆေးများ။
သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်၊ရေတိမ်၊အနာများ၊(ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းကြောင့်) ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊နှလုံးရောဂါ၊အသည်းရောဂါ၊သွေးတိုး၊အတက်ရောဂါ သို့မဟုတ် သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်အကျွံ အလုပ်လုပ်ခြင်းများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
သင်သည် အသက် ၆၅နှစ်အထက်ဖြစ်ပါက Hydroxyzine သည် အသက်ကြီးသူများတွင် အခြားသော အာနိသင်တူဆေးများနည်းတူ စိတ်ချရခြင်းမရှိသဖြင့် Hydroxyzine သောက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကို ဆရာဝန်နှင့် သေချာစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက Hydroxyzine သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
Hydroxyzine သည် ငိုက်မျဉ်းစေသဖြင့် ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစွာ မသိရှိသေးလျှင် ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာအကြီးစားများ မောင်းနှင်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အရက်သည် Hydroxyzine ကြောင့်ဖြစ်သော ငိုက်မျဉ်းမှု ကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Hydroxyzine သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
မျက်လုံး၊လျှာ၊မေးရိုး သို့မဟုတ် လည်ပင်းတို့ရှိ ကြွက်သားများ အကြောဆွဲခြင်း။
တကိုယ်လုံး မထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင် တုန်ခါခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hydroxyzine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အအေးမိအဖျားပျောက်ဆေးများ၊ အိပ်ဆေးများ၊ narcotic အုပ်စုဝင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ကြွက်သားပျော့ဆေးများ၊ အတက်ကျဆေးများ၊စိတ်ကျရောဂါ တွင်သုံးသော ဆေးများ၊စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း အတွက်သုံးသော ဆေးများ စသည့် ဆေးများသည် Hydroxyzine ၏ ငိုက်မျဉ်းစေမှုကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ဆေးများသုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Hydroxyzine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hydroxyzine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
တက်ခြင်း သို့မဟုတ် အတက်ရောဂါရှိခြင်း။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အဆုတ်ရောဂါများရှိခြင်း။
နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် သွေးတိုးရောဂါ။
အစာအိမ်အနာရှိခြင်း သို့မဟုတ် အစာအိမ်/အူတို့တွင် ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိခြင်း။
ဆီးကြိတ် ကြီးခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ။
အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ hydroxyzine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအတွက် : ၅၀ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေးအဖြစ် တနေ့လျှင် လေးကြိမ် ပေးရမည်။
ယားယံခြင်းအတွက် : ဓါတ်မတည့်ခြင်း အယ်လ်လာဂျီကြောင့် ယားယံခြင်း များအတွက် : ၂၅ မီလီဂရမ်ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေးအဖြစ် တနေ့လျှင် သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ် ပေးရမည်။
စိတ်ငြိမ်ဆေး/အိပ်ဆေး အာနိသင်ရလိုခြင်းအတွက် : မေ့ဆေးမပေးမီနှင့် ပေးပြီးနောက် : ၅၀ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေးအဖြစ် ပေးရမည်။
နာကျင်ခြင်းအတွက် : ၂၅ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီ/ပြုလုပ်ပြီး သို့မဟုတ် မီးဖွားပြီးချိန်တွင် အသားထိုးဆေးအဖြစ် ပေးရသည်။
ပျို့အန်ခြင်းအတွက် : ၂၅ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီ/ပြုလုပ်ပြီး သို့မဟုတ် မီးဖွားပြီးချိန်တွင် အသားထိုးဆေးအဖြစ် ပေးရသည်။
ကလေးတွေအတွက် Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သောက်ဆေး : 0.6 mg/kg/dose
အသားထိုးဆေး : 0.5 – 1 mg/kg/dose
စိတ္တဇဝေဒနာများနှင့် ဆက်စပ်သော စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊စိတ်တင်းကြပ်ခြင်း၊ အခြားသော ရောဂါများကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ကာလရှည် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများကြောင့် ယားယံခြင်း၊histamine ကြောင့် ယားယံခြင်း တို့ကို သက်သာစေရန်အတွက်
အသက် ၆နှစ်အောက် : စုစုပေါင်း ၅၀ မီလီဂရမ်ကို သင့်တော်သလို အကြိမ်ရေခွဲပြီး သောက်နိုင်သည်။
အသက် ၆နှစ်နှင့် အထက် : စုစုပေါင်း ၅၀ – ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို သင့်တော်သလို အကြိမ်ရေခွဲပြီး သောက်နိုင်သည်။
သောက်ဆေး : စုစုပေါင်း ပမာဏ 2mg/kg/day ကို ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြား သင့်တော်သလို အကြိမ်ရေခွဲပြီး သောက်နိုင်သည်။
အသားထိုးဆေး : 0.5 – 1 mg/kg/dose ကို ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြား သင့်တော်သလို ပေးနိုင်သည်။
အသားထိုးဆေး : 1.1 mg/kg/dose
Hydroxyzine (ဟိုက်ဒရောဇီဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
သောက်ဆေးတောင့် : ၂၅၊ ၅၀၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်။
အသားထိုးဆေးအတွက် ဆေးရည် : 25 mg/ml (1ml) ; 50 mg/ml (1ml, 2ml, 10ml)
သောက်ဆေးအရည် (solution ပုံစံ) : 10 mg/5ml (473 ml)
သောက်ဆေးအရည် (syrup ပုံစံ) : 10 mg/5ml (118 ml, 473 ml)
သောက်ဆေးပြား : ၁၀၊ ၂၅၊ ၅၀ မီလီဂရမ်။
http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/antihistamine- oral-route- parenteral-route-rectal- route/side-effects/drg- 20070373